Uyigcina njani iPhepha leWebhu kwiGoogle Chrome
NguJames T. Cain
I-terramycin ophthalmic ointment for izinja
Unokufumana ixesha apho ungenakuba kwi-Intanethi, kodwa usafuna okanye kufuneka ufunde umxholo othile kwi-Intanethi. Umzekelo omnye: uhambo olude ngenqwelomoya, apho unokufumana umda okanye ungafikeleli kwi-Intanethi, kodwa kusenokufuneka wenze uphando kuloo ntlanganiso ibalulekileyo yeshishini ubhabha kuyo. Endaweni yokupakisha izinto ezishicilelweyo, ungagcina amaphepha ewebhu kwikhompyuter yakho ukuze afundwe ngaphandle kweintanethi. Nantsi indlela:
Kwi-Chrome, cofa iqhosha le-Chrome kwikona ephezulu ngasekunene.
Khetha Gcina iphepha njenge. Ukugcina njengebhokisi yencoko yababini iyavela (jonga umfanekiso 1).
Ngenye indlela, ungacinezela i-Ctrl + S kwiWindows okanye iCmd + S kwi-Mac ukubiza Gcina njengebhokisi yencoko yababini.
Kwipaneli yasekhohlo, yiya apho ufuna ukugcina iphepha lewebhu.
Kwigama leFayile igama, nika iphepha lewebhu igama ukuba okonelelweyo akuluthandi. Qaphela ukuba i-Chrome ngokuzenzekelayo inika iphepha lewebhu igama elifanayo elivela kwibar yomxholo webrawuza, enokuba yinde kakhulu okanye ayiloncedo ngokukodwa.
Khetha ukuba uligcina njani iphepha lewebhu kwiGcina imenyu yohlobo olwehlayo:
Iphepha lewebhu, i-HTML kuphela: Olu khetho lusindisa kuphela i-HTML yephepha- Oko kukuthi, ikhowudi efundwa ngumkhangeli kunye nokutolika ukuze abonise iphepha. Ayigcini imifanekiso kunye nezinye iintlobo zeefayile. Emva kwexesha, xa uvula iphepha kwi-Chrome, uya kuqaphela ukuba kuya kuvela isicatshulwa kuphela kwiphepha, ngaphandle kwayo yonke ingxolo ebonakalayo ejikelezileyo.
Iphepha lewebhu, Gqibezela: Olu khetho lugcina yonke into efunekayo kwi-Chrome ukubonisa iphepha lewebhu njengoko liza kubonakala ukuba uyindwendwele ngexesha lokwenyani kwisikhangeli sakho. Sukukhetha olu khetho ukuba konke onomdla kuko ngumbhalo okwiphepha; Ngaphandle koko, uya kukhuphela izinto ezininzi ongazifuniyo kwaye uthathe indawo enexabiso kwihard drive yakho.
ungathatha i-aleve kunye ne-ibuprofen
Umzobo: 1: Ukugcina iphepha lewebhu ngeChannel.
Iphepha lewebhu ligcinwa kwikhompyuter yakho. Ngoku, hamba kwikhompyuter yakho apho ugcine ifayile kwaye uyivule. Kungcono ukuba ulivule iphepha lewebhu kwiChannel, kuba uligcine kwiChannel; ezinye iibrawuza zinokuba nengxaki yokuyibonisa ngokuchanekileyo.
Amaphepha amaninzi ewebhu aneentengiso kuwo. Xa ugcina iphepha lewebhu usebenzisa ukhetho olupheleleyo, ufumana yonke into efuna ukuba isiphequluli sibonise iphepha lewebhu. Kwaye ukuba iphepha lewebhu alakhiwanga kakuhle, ungaphelela kwezo ntengiso zibonisa kwiindawo ezingaqhelekanga, ezinje nge-smab dab embhalweni wombhalo wakho. Kungenxa yoko le nto ukuba unomdla kumxholo kuphela, ukhetho lwe-HTML kuphela kunokuba yindlela yokuhamba.
Umsebenzi wokujonga iziyobisi nih
ipilisi emhlophe embhoxo 15
uxinzelelo oluphezulu lweCaffeine
Ngaba isepha ye-ambi ikwenza ube lula
I-amlodipine idosi ephezulu ye-20 mg
Apho ukubeka iivick kwimpumlo exineneyo